“Irreechi dirree galataa malee, waltajjii Kaadiree miti!” – Kichuu
HomePhoto Gallery“Irreechi dirree galataa malee, waltajjii Kaadiree miti!”
“Irreechi dirree galataa malee, waltajjii Kaadiree miti!” Qeerroo Bishooftuufi naannawa isii irraa OMN dubbise.
Dabalata oduu kanaa liinkii gadii cuqaasuun argachuu dandeessuu.
Irreechi ayyaana Oromoon Waaqaaf galata itti galchu ayyaana galataati. Waaqa bacaqii gannaa baase galateeffataa, aadaa, duudhaafi safuu Oromtichaa ganamaatiin Orom booqaa birraa kan itti simatuudha malee, Dirree Kaadiree fi Waraanni ‘Afmuuzi’dhaan ummata itti doorsisan miti jedhanQeerrooon Bishooftuufi naannawa isii irraa OMN dubbise.
Irreecha baranaa Oromoon kan dur caalaa kaabaa kibbaa, bahaa fi dhihaa irratti hirmaachuun faaruu duudhaan kun ittiin beekamu, Mareewoo fi Gabbisayyoon miidhagsee kabajachuu akka qabus dhaamaniiru. Waytii ammaa kana Foollee, qeerrofi qarree moggaatti dhiibanii ergamtoota isaanii basaastota ganda gandarraa guuranii mariisisaa jiru kan jedhan qeerron Bishooftuu irraa dubbisne, Siyaasa daheeffatanii gufuu ayyaana kanaati jechuun Foolleefi sabboontota hidhaa jiraachuu ibsan.
Irreechi ayyaana ummataati waan ta’eef, Abbootiin Gadaa fedhii qaama angoorra jiruu qofa tarkaanfachiisuu dhiisanii, Irreechi walaba tahee bu’uuruma duudhaa isaatiin akka irreeffatamu tolchuu, mirgi irreeffattootaa akka kabajamu ummata wajjin ta’anii roga hundaan qabsaa’uu akka qaban dhaamaniiru.
Murni Bilxiginnaa irreeffattoota akka hin danqine Abbootiin Gadaa kallattii kaa’uuf dirqama qabu, nageenyi Irreeffattoota bifa amansiisaan akka kabajamuufis milishaafi dabballee qawwee baatu osoo hin taane, Foollee, Qeerroofi Qarree kana dura miidhagina ayyaanichaa turanitti dhimma bahuutu barbaachisa jedhu. Humna ummataa kana deebisanii haaromsuun qindeessanii itti dhimma ba’uun ammoo, adda durummaan gahee Abbootii Gadaa imaanaan ummatichaa irra jiruu ta’uu hubachiisaniiru.
Ummanni Oromoo bal’aan ayyaanicha of tasgabbeessee bifa tokkummaafi miidhagina qabuun, waan ayyaanicha ibsuun kabajachuu qabaanis dhaamsa Qeerrooti. Irreecha irreeffachuuf waan dhiibbaa tahuu malu mara dammaqinaan eeguun, miira wal dhagahuufi wal tiksuutiin ayyaanicha walaba tahee akka kabatus dhaamaniiru.
Kadir martu New Oromo Music 2021
Sirni Itoophiyaa takaalee qabe haa diigamu yeroo jennu sababa malee miti. Nuti dharraa sirna diiguu…
Abdiisaa Balaachoo: Jedhi Malee Abbaa Waloo kan tahe oladeeman Abdiisaan jedhi malee jedha. Maal dhagahuu…
Jimma :Burtukaana miti hadaadha kun G7 miti ABOdha. Fekadu Lemessa Yaa joollee yaa joollee ABOn…